Trump oo Soomaalidii ugu badnayd soo tarxiilay | KEYDMEDIA ONLINE
Sanadkii 2017, ku dhawaad 275 qof oo Soomaali ah ayuu Trump kasoo musaafuriyay dalka Mareykanka, kuwaasoo lagu soo celiyay dalka, oo markii hore colaadda uga carareen.
WASHINGTON, US - Madaxweyne Trump oo mudo-xileedkiisa 14 maalmod uga hartay ayaa soo tarxiiley Soomaalidii ugu badnayd sanadkan cusub, kuwaasoo Shalay oo Jimco ahayd diyaarad kasoo qaadey gobolka Louisiana.
Tiro ahaan waxay gaarayaan 70, oo dhamaantood rag ah, waxaana lagu dejinayaa Kenya, oo diyaarad kale uga soo qaadi doonto dhinac dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaaladda Muqdisho.
Sababta dadkan loo soo tarxiiley ayaa ah inay Mareykanka ay ku galeen qaab sharci-darro ah, iyagoo uga gudbay xuduuda Mexico, oo ah marinka ugu weyn ay Muhaajiriinta ka yimaada Koonfurta iyo bartamaha Latin America ka galaan.
Waxaa jira boqolaal kale oo Soomaalid ah oo ku xiran xabsiyo ku yaalla Mareykanka, kuwaasoo sugaya in lasoo musaafuriyo. Sanadkii 2017, markii Trump xukunka qabtay, 275 Soomaali ah ayuu soo tarxiilay.
Dadka lasoo celinayo qaar ayaa dhibaato la kulmay markii laga dejiyay Muqdisho oo qaraxyo iyo dilal ka socdaan, waxaana jira kuwa badan oo u cararay Kenya, oo qoxooti mar labaad ku noqday, iyagoo rajo ka qabo in Mareykanka uu qaado.